Mgbe ị dị njikere maka otu abalị na ma ị ga-amasị na-ekiri a nkiri, ị na-adịghị imebi àgwà N'ihi na mma. Dị ka ihe ndị ọzọ ndị mmadụ na-ekpe ndị USB telivishọn ahịa, oké ọdịnaya ụsụụ ndị agha pụta online. The nnọọ ebe kasị mma na-ekiri elu definition (HD) MP4 fim na-enye na-agbanwe agbanwe gụgharia ahụmahụ, ndakọrịta na multiple ngwaọrụ ụdị na sistem, na ihe dị mfe iji, mfe ịmụta ọrụ interface.
Part 1. The Best 10 HD MP4 Movie nrụọrụ
Part 2. Download MP4 Free na Wondershare AllMyTube
Otu n'ime ọkacha mmasị m iterations nke HD MP4 nkiri saịtị, m na-enwe imewe na okirikiri nhọrọ ukwuu na watchmoviestream.com. Ya arụmọrụ yiri saịtị ndị ọzọ - o nwere global search ọrụ, na ekewapụ fim na zuru fim n'ime nkeji abụọ dị iche. Full fim na-agụnye trailers. Àgwà bụ n'ozuzu nnọọ mma. The saịtị awade a ike nhọrọ nke na fim na ọha na eze na ngalaba. Nke ahụ bụ ihe pụrụ iche, na oké akụ maka ndị na-achọ ike ịchọta ma ọ bụ okenye na fim. The akụkụ kasị mma bụ na ndị a na fim bụ HD MP4, otú àgwà adịghị ata ahụhụ!
The nkiri si zuru ezu peeji na-enye a kọwara ná mkpirikpi nke film, mgbe mgbe si nkiri tọhapụrụ ngwugwu, a obodo reviews page, na yiri nkiri aro dabeere na mkpado etinyere ọ bụla faịlụ. Ke adianade do, na na-nchọgharị Embed nke nkiri onwe ya bụ kacha ụzọ maka onye ọrụ na-amalite ha HD MP4 nkiri ahụmahụ, kama na-enwe na pịgharịa site na a ụyọkọ nke njikọ ahụ nwere ike ma ọ bụ ghara iduga-arụsi ọrụ ike ọdịnaya.
Ndị na WatchMovieStream ndidi irè na-ọhụrụ na fim ngwa ngwa, iwuli elu ha n'ọbá akwụkwọ na ọdịnaya. Mgbe na-ekiri ndị ọhụrụ HD MP4 fim, na-agagharị gburugburu ụfọdụ nke saịtị bụ ihe ndị ọzọ Eclectic collection.
"Watchmoviestream.com nwere nnọọ nnukwu collection nke free gụgharia ọha na ngalaba nkiri na-ekiri free ọhụrụ ntọhapụ fim online nwekwara." - TechReviewPro
"A zuru ezu ngwugwu maka ndị na-achọ na-ekiri HD fim iwu na free." - Hacking-Guide.Com
2. agịga Movies
IGLO Movies, a website mepụtara, ụlọ ọrụ na-ekwu, na ala nke iji na ad-free gburugburu ebe obibi n'uche. Àjà ọhụrụ na-ewu ewu na fim maka gụgharia, IGLO bụ free nchọgharị weebụ dabeere. Ọ dịghị achọ software ma ọ bụ ngwa download - ihe niile na-ewe ebe nchọgharị na weebụ onwe ya.
The n'ihu na peeji awade nnukwu thumbnails nke nkiri ahịa oyiyi. Ị nwere ike ihe echiche nke ihe ị chọrọ - IGLO Movies nwere oké search ọrụ maka gị. E nwere ihe ikike peeji site na fim dabere na ha ntọhapụ afọ. The igodo mmanya-enye gị ohere akuakuzinwo n'ime afọ azụ 2013. Ma ọ bụ i nwere ike a Chọgharịa n'ihu gị dozie na ihe. Nke ikpe, a click nke òké emepe nkiri si nkọwa page.
Nkọwa nke ihe nkiri na-agụnye nkedo ndepụta, genre nke nkiri, na IGLO fim bụ maka. Ọ bụ omume na-ekerịta nkiri kpọmkwem site na peeji a, na-eji ọtụtụ ndị na-elekọta mmadụ media nyiwe. Ele ihe nkiri, onye ọrụ nanị clicks na "Watch Movie Ugbu a," njikọ na-eduzi ndị play na peeji nke maka ihe nkiri ahụ.
IGLO-egosi ihe nkiri na HD, dị ka ogologo oge kọmputa gị ma ọ ọzọ playback ngwaọrụ akwado elu definition.
Mmepụta: IGLO Movies
"Ikiri free fim online dịtụbeghị nnọọ mfe." - TechReviewPro.Com
"IGLO bụ ihe ịtụnanya free website ebe ị na-ekiri ọkacha mmasị gị na fim online enweghị okodu otu Akon." - TechTricksClub
Alluc si streamlined anya bụ ihe karịrị nanị a mara mma ihu. Alluc bụ nzọụkwụ n'ihu nke ọtụtụ n'ime ha mpi, na-elekwasị anya na-achọta nri ọdịnaya. The ụzọ ndị mmadụ na-aṅụ ọdịnaya ga-agbanwe, ma ike jikwaa nnukwu data agaghị agbanwe fọrọ nke nta ka ngwa ngwa.
Site akpa peeji, onye ọrụ bụ ike pịnye ke Keywords maka search, jiri menu njikọ n'elu nri iji nweta miri amaba ọrụ. Ka ihe atụ, ndị ọhụrụ searches-egosi ebe a, na otú ohere pịa bọtịnụ na-aga azụ na oge ochie Alluc.
Search mmanya na n'etiti ihuenyo-enye ohere onye ọrụ ịbanye Keywords na nkebi ahịrịokwu iji chọta ihe nkiri ha chọrọ na-ekiri. N'ezie, ọ bụrụ na ị nwere aha, dị nnọọ abanye na n'ime search bụ iji nweta gị ka video ị chọrọ. Ma, ka hà na anyị na-echefu na aha maka oge, ma anyị maara na ọ bụ a enyi cop nkiri si 1994. Alluc-ahapụ gị ịchọ HD MP4 vidiyo na-akpado na isi okwu na oké ọsọ na-agbanwe agbanwe uptime, na a dị ọcha na mfe iji interface.
"Alluc bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na kasị ochie free nkwaghari saịtị na-ahapụ gị ekiri free fim na videos online enweghị nbudata." -TechReviewPro
"Ma nke a zuru nkiri website ga-maa-azọpụta gị oge na mgbalị iji na-achọpụta free online fim na-enwe . "- VideoGrabber.Net
FreeFullMovies nwere okirikiri nhọrọ ukwuu na showcases thumbnails nke na-ewu ewu kpọmkwem utu aha. Ya thumbnails ka oyiyi si nkiri onwe ya, nke bụ a mma n'anya na-enye ume ọhụrụ mgbanwe.
Ọ na-enye ezi uche ndakpọ nke fim o nwere dị site afọ na awade categorization nhọrọ maka nchọgharị. Saịtị anọwo na ebe ọ bụ na 2008, na nwere otu ike followings na internet n'ihi na nke àgwà videos na ya n'ozuzu kensinammuo interface.
Mgbe ịpị a thumbnail, onye ọrụ na-ẹka a dị ọcha na mfe zuru ezu page. FreeFullMovies bụ eziokwu na iji ha na-azọrọ na n'ígwé nke mgbasa ozi na malware agaghị eso gị gburugburu na ha na saịtị. Nche kpọrọ mmepe na ụlọ ọrụ emewo ka mkpebi na-agụnye junk na ha na peeji nke. Nke a bụ nnọọ elu-ọgwụgwụ mkpebi na nleghari ka ndị mgbe na-ele ihe HD MP4 nkiri na ha na kọmputa ma ọ bụ ha ngwaọrụ mkpanaaka, nakwa dị ka ndị na-ukwuu oru na ike gwụrụ nke nhicha web junk mgbe na-ekiri na ụfọdụ saịtị ndị ọzọ. Onye ọ bụla nwere ike ngwa ngwa na-adị mfe ina malitere na FreeFullMovies, na e nwere mmachi ohere nke ibute ọrịa mgbe nbudata ha ọdịnaya.
A ubé ngwa nju oyi na funkier saịtị, ma ka dị ọcha na oge a na na mfe ịnyagharịa, Wolow tube enye ọrụ ohere inyocha a nnukwu nchekwa data nke HD MP4 fim. E nwere ihe ọ na-eri iji strimụ video on Wolow, na e nwere dịghị ịgba ka ihe i nwere ike enuba ma ọ bụ otú mgbe. N'ezie, Wolow awade nnọọ nta hassle inwe na n'ụzọ nke gị search maka HD MP4 fim maka gị n'ụlọ nkiri abalị! Ị pụrụ ọbụna ịchọ ma kpọọ azụ-egosi na telivishọn nri na nchọgharị gị. Ọ dịghị mkpa na iji wụnye specialized software ma ọ bụ na-elu na-ngwa. WolowTube dị mfe iji, n'agbanyeghị ihe n'elu ikpo okwu na ị bụ na, n'ihi na ọ bụ a nchọgharị-mepụtara mpempe software. Mgbe ọtụtụ ndị Wolow si asọmpi leverage ad ahịa iji kwagide ha azụmahịa, Wolow n'ụzọ ụfọdụ ejisie ha ego aga na-enweghị mkpa maka manụ na-emeghasị mmapụta mgbasa ozi.
"Ha nwere ịtụnanya nkiri gụgharia àgwà." - TechReviewPro
"WolowTube bụ otu nke kasị mma na kacha free nkiri gụgharia saịtị." - Aghụghọ Forum
JustMoviez bụ ihe HD MP4 nkiri aggregator. Ọ na-enyocha web maka na-adịbeghị anya na-ewu ewu na fim. N'ihi na ọrụ ndị nwere mmasị na-achọta nkiri na-ekiri online, enweghị akwụ ụgwọ a ego, JustMoviez bụ a akwa ebe na ime otú ahụ.
Dị iche iche formats dị, site 480p ruo elu definition nkiri, na onye ọrụ bụ ike họrọ ihe format iji strimụ na.
Mgbe hovering n'elu otu n'ime ndị mara mma nkiri posta dị ka thumbnails na n'ihu peeji na-enye gị a ngwa ngwa echiche nke nkiri, na ịpị thumbnail nke a film on n'ihu peeji nke JustMoviez ga-ewe gị ihe ọmụma peeji banyere onye aha. Na mgbakwunye na a aha kọwara ná mkpirikpi na fim, nkọwa-egosi na peeji onye ọrụ njikọ enuba fim. Na njikọ na-ọ bụla n'otu n'otu enyocha na usoro nke àgwà, na e nweghị registration chọrọ iji na-ekiri HP MP4 nkiri na JustMoviez.
Ọ bụghị nanị na onye ọ bụla aha si zuru ezu peeji nwere IMDb-dị ka ngalaba na ala, na-eme ka ọ dị mfe ịmụta banyere nkedo, ma ọ na-nwere a kwuru osisi ebe a obodo nke-ekiri nwere ike na-ezukọta si n'ụwa nile ma na-atụle a aha .
"JustMoviez bụ otu nke kasị mma nkiri gụgharia saịtị na-ekiri ihe nkiri online enweghị nbudata." - TechReviewPro
"The saịtị na-enye ezigbo gụgharia ọnọdụ ebe nkiri faịlụ ga-echekwara." - Aghụghọ Forum
WatchSeries bụ a ubé dị iche iche ụmụ anụmanụ si ndị ọzọ na peeji enyocha ebe a. N'ihi na otu ihe, ọ bụ ezie na ọ nọrọ n'ụlọ elu definition MP4 faịlụ, ha nwere ike ịbụ na fim ma ọ bụ telivishọn usoro. N'ihi na ndị na ẹfatde eriri ka USB TV, WatchSeries bụ oké ebe anya. Ndị a na-ewu ewu na-egosi mgbe pụrụ ịchọta na-akwụ ọrụ ma gịnị mere-akwụ ụgwọ mgbe ọ bụ dị ọsọ ọsọ na mfe Ka ịhụchalụ na TubePlus, na mgbe ị na-na-na na mbo ihu na ị chọrọ HD MP4 nkiri ma ọ bụ telivishọn show, ị pụrụ ime ka na ego?
Search na TubePlus bụ magburu onwe, ikwe maka isiokwu searches. The alaghachi bụ aggregated media, gụnyere telivishọn na fim.
Na ịpị thumbnail ịbanye zuru ezu na peeji nke maka a fim ma ọ bụ HD MP4 telivishọn show enye onye ọrụ a dị mma nke ukwuu interface. Na-eme nchọgharị ebe dị iche iche ji ke a usoro bụ enweghi mgbu na ala nke ihuenyo. Trailers na-ọbụna dị maka-egosi na telivishọn ma na fim, na Play na Download buttons dị nnọọ anya na ọ bụghị mgbagwoju anya na mgbasa ozi. Categorizations bụ mkpado dabeere, nke na-enye onye ọrụ ohere a dịgasị iche iche nke ihe ọmụma banyere fim ahụ na pụrụ iduga a oké na-atụ aro mmanya na n'aka ekpe.
Inwe ihu ọma otu mara mma, minimalist na oge a na Ọdịdị na-eme ka weebụsaịtị na nke a genre mfe iji na mma ka ahụmahụ, FreeMoviesWatch bụ a na-mepụtara n'elu ikpo okwu na a ntakiri n'ọbá akwụkwọ nke na fim. E nwere thumbnails na n'ihu peeji gbachiri onye na-agagharị na site ndị kasị ewu ewu na utu aha n'amaghị aha ha. E nwere ezigbo ndakpọ nke fim site afọ ma ọ bụ genre. Saịtị na-azọrọ na ha ama bụ na ya ike na ka ịgbakwunye kasị dị ugbu a na fim ndị kasị ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị na-achọ isi iyi na dị nnọọ n'elu nke ọdịnaya egwuregwu, mgbe ahụ, FreeMoviesWatch bụ ezi onye ahụ. Ị nwere ike mfe ekiri HD MP4 fim ebe a ka anya dị ka ha na-wepụtara.
E nwere ihe ole na ole na ike-mma banyere interface. Ka ihe atụ, onye na-kọlụm obibia okirikiri nhọrọ ukwuu na-arụ ọrụ nke ọma na ụfọdụ ngwaọrụ, ma ma na-anabata usoro na desktọọpụ saịtị bụ gbajiri ma ọ bụ n'ebe kwesịrị ịbụ a ọzọ echekwa na isi zuru okè ụzọ n'ihi na ọrụ na-agagharị na-enweghị na-pịgharịa site na tọn ihuenyo ezigbo ala na ụlọ na-esi ihe ha na-achọ. Na kwuru, ikpo okwu na etiÚnye gụgharia njikọ na a nkiri aha si zuru ezu peeji n'elu-na-na-anọghị n'ogige atụrụ, nke bụ ihe na-enye ọtụtụ ndị HD MP4 gụgharia nkiri saịtị na-adịghị àjà.
"FreeMoviesWatch.com bụ nnọọ ọrụ enyi na enyi katalọgụ nke nkiri si njikọ na-ekiri na gụgharia." - BestFreeStreamingHQ
A nnọọ mfe ịchọ Ọdịdị na-enye ndị ọrụ nwere ike ghara ịbụ na web-savvy a ụzọ na-agagharị ma na-ele fim ọsọ ọsọ na mfe na-enweghị mmụta usoro. The thumbnails maka fim niile bụ ihe ahịa si fim, otú ọrụ ga-enwe ike ọsọ ọsọ na mfe ịmata HD MP4 nkiri ha chọrọ na-ekiri.
Na ịpị otu n'ime thumbnails-ewe onye ọrụ na-na fim na zuru ezu page, dị na mbụ. Nke a zuru ezu peeji bụ kpam kpam Dịkwa n'Usoro site mgbasa ozi, nke bụ oké gbakwunyere. Ọ bụ na-mfe inwe gburugburu, na otu onye dị mfe button na-ekwu "Watch Movie na HD". A mkpirikpi kọwara ná mkpirikpi ihe nkiri, njikọ yiri fim (categorized site geo), trailers na otu nhọrọ maka ndị obodo na-enye nkiri reviews niile bụ na tebụl na iMovieTube.
Mmepụta: iMovie tube
"Ọ na-enye niile Genres na fim ndị kacha HD ahụmahụ." - Aghụghọ Forum
"iMovieTube nwere nnọọ ukwuu collection nke nnukwu ọnụ ọgụgụ nke HD fim." - TechReviewPro
FreeStreamingMovies bụ ezigbo akụ maka ndị ọhụrụ releases na HD MP4 nkiri usoro. Saịtị dị ọcha, mfe ịnyagharịa, na incorporates thumbnails nke na-adịbeghị anya na-ewu ewu na fim ọ na-enye n'ihu ya page. FreeStreamingMovies nwere ezi search ọrụ, ma ọ na-enye mmachi Atiya nchọgharị nhọrọ. Nke a pụrụ ịbụ a downside n'ihi na ọrụ ndị maara ha chọrọ na-ekiri a elu àgwà nkiri na HD MP4 usoro, ma ị maghị kpọmkwem ihe aha ha chọrọ anya na.
Dị ka ọtụtụ ndị HD MP4 nkiri saịtị, na ịpị thumbnail nke a aha na n'ihu peeji na-ewe onye ọrụ na-a zuru ezu peeji banyere ahụ nkiri. Na ikpe nke FreeStreamingMovies, nju peeji na-littered mgbasa ozi. Gịnị bụ otu ihe Dịkwa n'Usoro na streamlined n'ihu na peeji atụgharịa n'ime a distracting na mgbagwoju ọgbaghara na nju n'akụkụ. Mgbe e nwere a "Sponsored Content" nkụnye eji isi mee, ọ bụ iji mezuo iwu n'echiche bụ na ọrụ ga-ike-ekpebi nke buttons bụ ad na nke bụ ọrụ buttons ele ma ọ bụ download HD MP4 fim. Ọrụ nwere ike pịa otu njikọ ibudata nkiri, na a dị iche iche njikọ na-ekiri ndị HD MP4 nkiri, ma e nwere yiri buttons maka ndị a omume ndị bụ n'ezie ndị ad buttons. Nke a nwere ike nwere ike iduga mgbagwoju anya na akụkụ nke na-erughị oru ọrụ.
Mmepụta: Free gụgharia Movies
"Ha nwere nnukwu collection fim ha nchekwa data." -TechReviewPro
"Ọ bụrụ na ị na-achọ ndị kasị mma free nkiri gụgharia saịtị, FreeStreamingMovies.cc dị nnọọ ka ị." - Aghụghọ Forum
Part2. Download MP4 Free na Wondershare AllMyTube
N'ihi Gịnị Ka My MP4 File Enweghi Sound?
MP4 Bollywood Movies, Top 10 Sites ka Download
Olee otú Play MP4 na VLC
> Resource> MP4> Top 10 HD MP4 Movies nrụọrụ